बागलुङमा उत्पादित मौरीघार भारत निर्यात
बागलुङ । बागलुङमा उत्पादित आधुनिक मौरीघार छिमेकी राष्ट्र भारतमा निर्यात हुन थालेका छन् । बागलुङ नगरपालिका–१२, अमलाचौरमा रहेको बलेवा मौरीपालन उद्योगले उत्पादन गरेका घार भारतको सिक्किममा निर्यात हुन थालेका हुन् ।
सिक्किमको कृषि विज्ञान केन्द्रले घार खरीद गरेर त्यहाँका किसानलाई उपलब्ध गराउन थालेको हो । सार्वजनिक सूचनामार्फत मूल्यसूची माग गर्दा स्थानीय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेको उद्योगले घार उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पाएको थियो ।
पहिलो चरणमा २२६ घारका लागि विज्ञान केन्द्रले माग पठाएकाले निर्यात प्रक्रिया थालिएको उद्योग सञ्चालक जीवनबाबु खत्रीले बताए । ‘पत्रिकामा आएको सूचनाका आधारमा मूल्यसूची पेश गरेका थियौं, हाम्रो घारको गुणस्तर र मूल्य दुवै सारभूत भएको भन्दै हामी छनोटमा परेको सूचना आयो,’ खत्रीले भने, ‘त्यहाँको सरकारी निकायले नै हाम्रो घर किसानलाई बाँड्ने भएपछि माग थप बढ्नेछ ।’
अहिले पनि भारतबाटै मौरीका घार नेपाल आइरहेको अवस्थामा यहाँ उत्पादित घार भारतीय किसानसम्म सुखद पक्ष भएको खत्रीले बताए । ‘सहज वातावरण हुने हो भने आयात घटाएर निर्यात बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
टुनीको काठबाट बनेका घरको माग बढी रहेको उनले बताए । पहिलो पटक भारत निर्यात गर्न थालिएकोमा नेपालबाट भन्सार पार गराउन पु¥याउनुपर्ने प्रक्रिया भने झन्झटिलो रहेको गुनासो उनले गरे ।
उद्योगमा ९ जना कालीगढले घार बनाउने काम गर्छन् । नेपालमा मात्रै खपत हुने गरेका मौरिघार विदेशमा समेत माग हुँदा उत्पादन र रोजगारी दुवै बढ्ने खत्रीले बताए । वार्षिक १ हजार २०० घार उत्पादन गर्दै आएको सो उद्योगले पोखराबाट टुनीको काठ खरीद गरेर घार बनाउने गरेको छ ।
उद्योगका अनुसार प्रतिघार मूल्य रू. ३ हजारदेखि रू. ३ हजार ६०० सम्म रहेको छ । उद्योगले मौरीसहितका घारलाई भने ८ हजार ५०० मा विक्री गर्ने गरेको छ । १०० घार मौरी रहेको उद्योगमा वार्षिक हजारौं लिटर मह उत्पादन हुन्छ । उत्पादित मह प्रतिकिलो रू. १ हजारमा विक्री हुने गरेको बताइएको छ । रासस